Home / Falanqayn / Falanqaynta Miisaanka Maansada
Idiris Cali January 17, 2017	Falanqayn, Suugaan Leave a comment 6,715 Views
Halkan kala deg curiska oo dhammaystiran (PDF)
MIISAANKA MAANSADA waa cinwaanka maqaallo taxane ah oo uu qoray, naxariistii Janno Alle ha ka waraabiyee, Maxamed Xaashi Dhamac (Gaarriye). Iyagoo markii hore ku soo baxay wargeyskii Xiddigta Oktoobar laga bilaabo Bilkowaad (Jannaayo) 17, 1976 illaa Riyaale (Maajo) 29, 1976, waxaa maqaalladan dib loogu sii faafiyay Warsidaha BADSO—waxaana taas ku mahadsan Xarunta Cilmibaarista Soomaaliyeed ee Jaamacadda Daraasaadka Roma Saddex oo nuqullo maqaalladan ah soo gelisay Kaydka Soomaaliya—si dadweynaha looga haqab tiro aqoonta ay xambaarsan yihiin ee lagu gorfeeyo dhismaha maansada. Baahida jirta, taas oo aynu curiskan ku daboolayno, waa in dadweynaha si faahfaahsan loogu saafo aragtiyaha Gaarriye, iyo kuwa kale ee la hal maala, ee miisaanka maansada Soomaaliyeed.
Haddaba, markii ay maqaallada Gaarriye soo galeen maqaaxiyaha Muqdisho, bal malee adiga oo ah barihii suugaanta oo uu adeegihii shaaha kuu keenayay ku leeyahay: “Maanso curintu waa wax fudud oo la baran karo!” Adiga oo gocanaya muddadii dheerayd ee aad baranaysay curinta iyo faaqididda maansada, waxa aad adeegahaas ugu warcelinaysaa: “Adeer waa la baran karaaye, mase fududa. Kolka hore waxaa loo baahan yahay in dhegtaadu aqoonsan karto laaxinka iyo deelqaafka. In badan ayayna kugu qaadanaysaa in dhegtaadu hawlahaas la qabsato.” Markaas ka dib ayuu adeeguhu kuu keenayaa nuqulkii Xiddigta Oktoobar ee toddobaadkaas, oo uu ku leeyahay: “Miisaankii maansada, Gaarriye ayaa qeexay oo laaxinkii si fudud ayaa immika farta loogu fiiqi karaa, la isagana dhawri karaa. Deelqaafkana awalba dhegtaydu way soo saari ogayd.” Markaas waano kale oo kuu hadhay ma jirto wax aan ka ahayn: “Adeer murtida barashadeedana ku dadaal!”
Sheekadan kore waxa ay muujinaysaa in barashada miisaanka maansadu fure u tahay curinta tixo kala geddisan oo maanso ah. Qofku si toos ah ayuu aqoontan u baran karaa, ama si dadban oo uu u marayo qalbiga halkii uu u mari lahaa qalinka. Haddii uu si dadban u bartona, way ku adkaanaysaa, sidii laashimiintii hore, inuu qeexo laaxinka, oo uu si cilmi ah u saafo, inkasta oo uu garan karo meelaha uu laaxinkani kaga jiro tix. Laashimiintuna, ha u barteen miisaanka maansada si toos ah ama si dadban, waxa ay mar walba ku kala tegayaan kartidooda aftahameed, oo ah sida ay aragtiyo kasta ugu bayaamin karaan ereyba ereyga uu ka habboon yahay. Waxa kale oo ay ku kala tegayaan sida ay murtida u saaraan tixahooda. Murtida lafteedu barasho ayay ku imanaysaa. Waxa ayna ku xiran tahay sida uu qofkani u lafaguro sooyaalkii, sheekooyinkii iyo murtidii hore, oo uu sida ugu balaaqo roon u adeegsan karo.
Gaarriye waxa uu ka xog warramay waxa uu dhafanuhu yahay, hayeeshee u ma magac bixin! Sida uu ku qoray maqaalkiisa koobaad, waxaa “jira laba shibbane oo si gaar ah u dhaqma. Waxay kala yihiin (W) iyo (Y). Labadaan xaraf dhawaaq ahaan, mar waxay u dhaqmaan sida shibbanayaasha, marna sida shaqallada” (1976a). [Labadan xaraf marka ay sida shaqallada oo kale u dhaqmayaan waa marka aysan shaqallo kale ku dabo nabnayn, erey gudihiis, sida: ayso, weyso, qoys, awr, kow iwm. Sida muuqata, waxaa is raacaya shaqallada ka horreeya iyo iyaga, sida hoostaba looga xarriiqay. Waana marka ay curinayaan dhafanayaasha, waa haddii ay shaqallada ka horreeyaa gaagaaban yihiin, sida: ay, ey, oy, aw, ow iwm. Dhanka kale, labadan xaraf haddii ay shaqallo ka dambeeyaan waxa ay u dhaqmaan sida shibbanayaasha, tusaale: koryaal, jawaan iwm. Sida muuqatana, waxaa is raacaya shaqallada ka dambeeya iyo iyaga, sida hoostaba looga xarriiqay.]
Inkasta oo uusan Gaarriye u magac bixin “alanka” haddana qayb ka mid ah alanka oo muhiim ah ayuu diiradda saaray: shaqalka. Waxa uu maqaalkiisa koobaad ku qoray: “Marka u horreysa waa inaynu isla garanaa inay erayadu ka kooban yihiin shaqallada iyo shibbanayaasha. Shaqallada ayaana dhawaaqa sameeya” (1976a). [Si kale haddii loo dhigo, dhawaaq(yad)a uu uu erey ka kooban yahay ayaa la dhahaa “alan.” Tusaale ahaan: af/ta/han, a/liin/di, maa/days/ka iwm—oo intuba ah ereyo saddex saddex alan ka kooban. Alanku waa uu xidhan yahay haddii ay labo shibbane isku gadaamaan shaqal ama dhafane (sida: han, days iwm); haddii kalese waa uu furan yahay. “Marka la muujinayo alammada erey ka kooban yahay, hal xeer ayaa la tixgeliyaa, kaas oo ah: erey dhexdiis, xadee shibbane uu shaqal ka dambeeyo hortiisa. Tusaale ahaan: Awr/boo/gays—oo waxaa la xadeeyay, maaddaama oo ay shaqallo ka dambeeyaan, b iyo g hortooda.”[i]]
[i] Xogtan waxa aan ka soo rujiyay curis ku saabsan alifba’da oo hadduu Eebbe idmo dhowaan soo baxaya.
gaarriye maanso miisaan suugaan	2017-01-17
Tags gaarriye maanso miisaan suugaan
Previous Mamuu iyo Seyn 1
Next Mamuu iyo Seyn 2: Ciidda Guga